DAAWO VEDIO; Muranka Shirkad Maalgelin oo laga aas aasay Imaaraadka Carabta oo ka taagan Somaliland – Marqaanmedia24.com
DAAWO VEDIO; Muranka Shirkad Maalgelin oo laga aas aasay Imaaraadka Carabta oo ka taagan Somaliland
February 14, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 9
Xisbiga Ucid oo markii ugu horeysay war ka soo saaray shirkad si weyn muran udhalisay oo masuuliyiin xukuumadda ka tirsan ay ka aas aaseen dalka Turkiga.
DAAWO MUUQAAL: Maamulka Somaliland oo Go’aan lama filaan ah ka soo saaray xuka 14-february maalinta Jaceylka Aduunka
Wadahadalada u socda ONLF iyo Itoobiya oo galay Maalintii Afraad
Maanta laga bilaabo Somalilander ban ahey
DEG DEG:Somaliland oo yeelatay Mdaxaweynihii Saddexaad & Maamulka Muuse Biixi oo lagu dul dhisay laba Maamul oo kale “Caasimada Maamulkan Waa……
February 14, 2018 | Filed under: Wararka Maanta | Posted by: Wararka
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Somaliland ayaa sheegaya in mid kamid ah magaalooyinka waa weyn ee Somaliland dhawaan lagaga dhawaaqi doono maamul kale oo ka madax banaan maamulka hogaamiye Muuse Biixi Cabdi oo kaas haatan qaban qaabada dhismihiisu ka socoto gudaha Somaliland.
Wararku waxa kale oo intaasi kusii darayaan in maamulkani cusub ay dhisan rabaan qaar kamid ah Beelaha Isaaq ee kasoo hor jeeda xukunka Muuse Biixi, kuwaas oo qaarkood dhawaan kaga dhawaaqeeyeen dalka Maraykanka madaxweyne cusub iyo sidoo kale dowladd goboleed kale oo cusub.
Somaliland guul guul. kanaxow nafta waa
Somaliland Oo Aakhirkii Ogalaatay Midnimada Soomaaliya Iyo Qorshihii Federaalka (Qoraal Kooban)
February 12, 2018 | Filed under: Important News,Wararka | Posted by: admin
Wasiiirka Arrimaha dibadda ee Somaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegay in dalka Switserland uu aakhirkii fududayn doono wadahadalada Somalia iyo Somaliland, waxaase ka horayn doona in Madaxwayne Farmaajo iyo Muuse Biixi ku kulmi doonaan Jabuuti.
Hadaba switzerland waa dal 200 oo sano ka hor ku midoobay federaal
Halkaan ka eeg Federaalka Switzerland ay ku tanaaday
Switzerland waa dalka ugu federaalsan Europe.
Waana dalka ugu wanaagsan ee haysta maamulka baahsan oo wuxuu ka koobanyahay 26 dawlad gobaleed, waxaana looga hadlaa 3 luuqadood, waxaana jira maamul gobaleedyo maamulkoodu uunan waxwab saasa ka duwanayn dal madaxbanaan.
Waana fikir wanaagsan in aakhirkii ay Somaliland waaqiciga usoo dhawaadaan oo khiyaaliga meel la iska dhigo, waanan soo dhawaynaynaa hadalka kasoo yeeray maamulka Somaliland.
Somaliland guul guul.
Maafiyadan magaca ‘Somaliland’ ku qadhaabata markoodii hore ba deeqaha shacabka saboolka ah loogu soo dhiibo ayay weligood ba afka u dhigan jireen oo waa wada xaaraan ku nool iyo xaaraan ku naax. Malaayiinta ay hambageen geyiga dhammaantii ayay laamiyadu is wada qabsan lahaayeen oo isbitaallo waaweyn iyo boqolaal skuullo ah lagu dhisi lahaa. Kumanaan caruur ah (oo wada Isaaq miiran ah) ayaa tallaalyo iyo daryeel caafimaad ba haleeli lahaa iyo hooyooyinkood ba. Laakiin ma dhicin oo mana dhici doonto oo dayaca iyo silaca ka muuqda waa loo wada jeedaa.
Ma se ogtihiin in kumanaanka kun oo dhalliin yaro ee tahriibta galaysa ee kuna lee’anaysa badaha iyo saxraha ba ay 90% deegaanada Isaaqa ka soo tahriibeen? Miyaa se laga war hayaa isbeddelka bulsheed ee xooggan ee Woqooyi Galbeed iyo Burco ka hirgalaya in dhawaale, iyo in ay Oromada iyo Xabashidu ayaxa sidiisa ugu soo qulqulayaan oo ula wareegayaan?
Nacasyada meelahan ka dhuryama ee magacyadeena koobbi gareynaya ee midnimada iyo qarannimada Soomaaliya nacebi deegaanadoodii ummad kale ayaa kala waregeysa oo dhallaankoodii badahaas iyo saxrahaas ayay ku halligmayaan. Masiibooyinkaas waaweyn ee mashruuca beenta ah ee ‘Somaliland’ kaga habsaday u ma muuqdaan oo nacaybka Soomaalida kale ayaa ka indho iyo dhega tiray runtii. ‘Somaliland’ maxay idiin soo kordhisay haddii deegaannadiinii dhammaa ba la idin kala dhaxal wareegay?
Dahabshiil ba in dhawaale waxay ka ganacsanaysay suuqa ka-dallaalsiga sicir bararinta sarrifyada iyo lacagaha (speculative financial market) oo kuwani hadda la hadal hayo iyana saantaas ayay qaadeen. Ganacsiga suuqani waa xaaraan maqdac ah ee aanu ku dhiiran karin ruux muslim ahi. Gaalada ayaa xataa ku tilmaanta in uu yahay suuq ribooyinka ugu xun ku salaysan oo aanu ku biiri karin ruux damiir leh ee ay binu aadminimo ka qoyantahay.
Waa suuqa aabbaha iyo hooyada u ah sicir bararyada caalamka ka dhaca ee sababa faqriga baahsan ee qaaradaha iyo dalalka saboolka ah ka jira. Maafiyadan magaca ‘Somaliland’ ku budhcadeysa iminka heerkii ugu halisnaa ayay hunguriga iyo damacu ka gaareen – xasbunallaah!
Cismaan Cawad maanta maxaa kugu cusub illaa waa adiga reer Abtigaa calanka ka agmutaye?Ma lagu soo wacay oo balan baa laguu dhigay?Si baad maanta u faraxsan tahee see wax u jiraan?
@ Atoore qoodhaa iyo xeradaa ma waxaad kala garan wayday magaca copy-ga ah qoraalladayda raddinaya?
See waaye saaxiib noh?